Avereno jerena ny VR BOX 2.0, ny vera virtoaly mora vidy tsara indrindra | Androidsis
Iray amin'ireo vokatra mamely mafy indrindra amin'ity taona ity dia, tsy isalasalana, ny solomaso virtoaly izay mamela antsika hiroboka tanteraka amin'ny tontolon'ny lalao video na koa ny sinema telo-habe, solomaso toy izay asehonay anao ao aminy dia vita Famerenana VR BOX 2.0, fantsika Solomaso ambany vidiny amin'ny vidiny ambany dia ambany tokoa Azonao atao ny mahazo azy ireo latsaky ny 16 Euros amin'izay hananantsika ny fotoana hanandramana ny traikefa amin'ny zava-misy virtoaly miaraka amin'ny antoka mahafa-po avo sy ny kalitao mendrika mihoatra ny mendrika izay tsy misy fitsiriritana ny solomaso hafa amin'ny fomba izay quintuple aza ny vidiny.
Ka raha te hahalala ianao izay rehetra omen'ireto VR BOX 2.0 ireto anay, izay ho ahy iray amin'ireo solomaso virtoaly virtoaly tsara indrindra ao anatin'ny elanelam-bidiny, tsy isalasalana fa tsy tokony halahelo an'ity lahatsoratra ity ianao satria hasehoko anao amin'ny antsipiriany ireo solomaso virtoaly ireo ary koa fanehoan-kevitra momba ny fahatsapako tamim-pahatsorana an'ilay vokatra. Ka inona no andrasanao tsindriana «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity».
Ny zavatra voalohany tokony homarihina dia ny kalitaon'ny vokatra avo sy ny fampisehoana kanto izay ahatongavany ao anaty fonosana farany. Toy izany ianao VR BOX 2.0 Manantona antsika amin'izay rehetra ilaintsika izy ireo mba hahafahantsika manomboka amin'ny kalitao amin'ity zava-misy virtoaly ity. Ary toa tsy mampino fa amin'ny 16 Euros monja dia afaka mahazo ny fonosana vera virtoaly VR BOX 2.0 misy an'ity manaraka ity isika:
Vera virtoaly virtoaly VR BOX 2.0
Controller Bluetooth - Mikasika ilay lavitra misy Bluetooth, dia betsaka ny zavatra holazaintsika momba ny ambany kokoa.
Torolàlana fanombohana haingana.
Pads 3 ho an'ny fihazonana marina ny finday avo lenta mitahiry ny bokotra terminal.
2 fonosana famaohana lena lena mba hanadio ny solomaso solomaso ary koa ny efijery an'ny Smartphone.
1 Esory ny lamba fanoherana ny vovoka sy ny volo ho an'ny fanadiovana ny lantiro sy ny efijery an'ny Smartphone.
2 3M fametaka fametahana.
Ny vera antonony hiarovana ny lantina amin'ny vovoka ary tompon'andraikitra amin'ny fanivanana ilay jiro manga ihany koa izy ireo ka ny havizanan'ny fahitana rehefa mampiasa ireo vera fitaratra virtoaly ireo dia kely lavitra.
1 Fitaovana famolavolana sy fananganana ny vera virtoaly VR BOX 2.0
2 Remote Controller amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny VR BOX 2.0
3 Hifanaraka amin'ny VR BOX 2.0 ve ny finday avo lenta?
4.3 Tsindrio eto raha hividy azy ireo amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra
Fitaovana famolavolana sy fananganana ny vera virtoaly VR BOX 2.0
ny VR BOX 2.0 Izy ireo dia solomaso virtoaly virtoaly izay amin'ny lafiny famolavolana ivelany azy dia mety handalo tsara amin'ny solomaso zava-misy virtoaly an'ny Samsung the VR Gear na Gear VR, miaraka amina tsipika sy famaranana avo lenta izay mifantoka amin'ny fampiononana farany ambony amin'ny fampiasana azy ireo.
Ny VR BOX 2.0 dia vita amin'ny plastika, polycarbonate avo lenta miaraka amin'ny faritra feno padded ao amin'ilay faritra izay mikasika ny tarehintsika hialana amin'ny fikorontanana mivantana amin'ny plastika ary hialana amin'ny ratra na marika amin'ny fampiasana ilay gadget, amin'izay manome antsika fahatsapana fampiononana izay hanadinoantsika ara-dalàna fa mitafy azy isika.
Ireo fasteners mba hametahana ny gadget eo an-dohany teboka telo amin'ny vatofantsika. amin'ny lafiny roa amin'ny loha ary eo ambony fotsiny, ireo telo azo ovaina amin'ny refy ka ny fahatsapana fampiononana, filaminana ary fanitsiana dia tonga lafatra ary afaka milentika tanteraka amin'ny lalao na sarimihetsika isika nefa tsy mila mitazona ny solomaso amin'ny fotoana rehetra na manana ny fahatsapana fa hiala amin'ny fotoana rehetra izy ireo. mamoaka.
Toy izany koa, ny fanaraha-maso lavitra na Fanaraha-maso lavitra Bluetooth dia manana endrika mahaliana miaraka amin'ny valizy mifangaro sy bokotra marobe, na dia hiteny anao kely eto ambany aza aho amin'ny fizarana manokana, dia samy Ireo fitaovana fananganana sy ny fiasan'izy ireo dia mamela zavatra be faniry.
Remote Controller amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny VR BOX 2.0
Tsy misy fisalasalana ny lafiny ratsy indrindra amin'ireny vera ambany zava-misy virtoaly Low Cost ireny, ary ilay fanaraha-maso lavitra na mpanara-maso Bluetooth ho toy ny joystick izay miaraka amin'ny VR BOX 2.0, ankoatry ny fananganana fitaovana plastika ambany dia ambany, hany ka ny fonony aoriana amin'ny bateria dia misy roa fotsiny indraindray. tsy dia akaiky intsony, amin'ny ankamaroan'ny lalao VR izay nanandramako tao amin'ny terminal Android-ko, dia ho mpanara-maso tsotra fotsiny izy ary hivoaka lalao sasany.
Azoko lazaina izany ilay joystick miaraka amin'ny VR BOX 2.0 dia tsy misy ilana azy mihitsy satria tsy ho mendrika na inona na inona amin'izay antenaintsika amin'ny mpanalavitra lalao lavitra izany.
Hifanaraka amin'ny VR BOX 2.0 ve ny finday avo lenta?
ny VR BOX 2.0 dia mifanaraka amin'ny smartphone Android manomboka amin'ny 4,5 ″ ka hatramin'ny 5,7 ″, na dia mila mahafeno fepetra ara-teknika sasany toa ny manana gyro sy accelerometer namboarina mamantatra sy mandika ny fihetsiky ny lohantsika.
Ho fanampin'izany ary na dia tsy fitakiana tena ilaina aza izany, raha maniry ny hankafy traikefa sy hatsaram-panahy anaty lalao sy sarimihetsika ianao, koa mila smartphone ianao miaraka amin'ny efijery misy fehiny farafahakeliny FullHD na avo kokoa.
Famaranana tsara sy fitaovana fananganana
fatorana teboka telo
Izy ireo dia mampiditra vera marokoroko izay manivana hazavana manga
Controller Bluetooth tsy azo ampiasaina
Tsindrio eto raha hividy azy ireo amin'ny Amazon amin'ny vidiny tsara indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Avereno jerena ny VR BOX 2.0, nosedraina ny solomaso Virtual Reality lafo vidy indrindra izahay
Rebeca dia hoy izy:
Azonao atao ve ny mividy fanaraha-maso hafa izay mifanaraka amin'ny solomaso?
Valiny tamin'i Rebeca
Ny fanaraha-maso dia azo ampiasaina amin'ny filalaovana fa tsy ny habetsahan'ny feo fotsiny.
Raha vantany vao ampifandraisina amin'ny finday avo lenta io, manindry sy mitazona bokotra eo amin'ny fanaraha-maso lavitra + + C mandritra ny segondra vitsy dia miditra amin'ny maody GAME izy io.
Hahatsapa izany isika satria afaka mivezivezy amin'ireo sary masina eo amin'ny biraon'ny smartphone miaraka amin'ny tehina fanaraha-maso.
Tadidio fa tsy ny lalao VR rehetra no manohana ny fampiasana fanaraha-maso lavitra. Fa mba hitsapana azy io dia omeko ny lalao Fantasy VR.
Faryd ortiz dia hoy izy:
Satria ny hafa izay amidy dia miaraka amina fanaraha-maso mainty misy bokotra vitsy kokoa. Inona no maha samy hafa azy, ambany kalitao ve izy ireo?
Mamaly an'i Faryd ortiz
Javier Alvarez placeholder image dia hoy izy:
mividy VOS misimisy kokoa izy ireo dia toy ny maodely aseho amin'ity lahatsoratra ity, miaraka amin'ny fahasamihafana farafahakeliny misy lavaka eo anoloana, tiako ho fantatra hoe inona izany ary inona no izy ... Misaotra
Valiny tamin'i Javier Alvarez
Ny fakan-kevitra haingana dia mifanaraka amin'ny finday Huawei P10